Fifidianana andrimpanjakana :: Lany ho filohan’ny HCC Rakotoarisoa Florent • AoRaha
Fifidianana andrimpanjakana Lany ho filohan’ny HCC Rakotoarisoa Florent
Tontosa, omaly, ny fifidianana izay ho filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Tamin’ny alalan’ny fivoriana ampitain-davitra (visioconference) no nanaovana ny fifidianana izay ho filohan’ity andrimpanjakana ity.
Kandidà tokana ihany, Rakotoarisoa Florent, izay sady zokiny indrindra tamin’ny mpikambana rehetra, no nirotsaka hofidiana. Nifidy azy avokoa ireo mpitsara avo miisa valo nandray anjara tamin’ny fifidianana.
Tsy isan’ireo nandray anjara tamin’ny fifidianana ny mpikambana, Noelson William. “Tsy mbola nahavita fianianana izy, ka tsy mbola afaka mandray anjara amin’ny andraikitra ato amin’ny HCC araka ny voalazan’ny lalàna”, hoy ny loharanom-baovao avy eny Ambohidahy. “Manana olana arapahasalamana itsy mpikambana ao amin’ny HCC itsy ka noho izay antony izay no tsy nahateo azy tamin’ny fotoana nanaovan’ireo mpikambana valo mianadahy fianianana”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Tsy vahiny amin’ny andraikitra ao amin’ny HCC itsy filoha vaovao, hisolo an-dRakotoarisoa Jean Eric, itsy. Efa mpitsara avo mpikambana tao amin’ny HCC izy, tamin’ny taona 1992 ka hatramin’ny 1996 sy 1996 ka hatramin’ny 2001. Efa nitana ny andraikitry ny minisitry ny Fitsarana mpisolo toerana ihany koa izy ary efa minisitry ny Atitany tamin’ny Tetezamita farany teo. Tonia ambony mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana ambaratonga ambony Toliara izy, mialoha ny nifidianan’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara hisolo tena azy ireo ao amin’ny HCC izao. Nandefa fiarahabana azy tamin’ny kaonty Facebook ny filohan’ny HCC teo aloha Rakotoarisoa Jean Eric.
Fitaterana an’habakabaka Voafaritra ny sokajin’olona afaka mivoaka sy miditra eto Madagasikara
Fahatrarana volamena tatsy Afrika Atsimo Misy ny herijika hitsarana an’ireo telo lahy eto Madagasikara
Fanadinam-panjakana :: Hikatona anio ny fisoratana anarana amin’ny Cepe